Ukuhweba - Yini lokhu?
Abantu ebhekene ezimakethe zezimali kanye kwabebhange ngizwile into ezifana ukuhweba, kodwa hhayi wonke umuntu uyazi ukuthi lisho ukuthini. Ngaphambi internet waqala ukuthuthukisa, ubungcweti ngokuvamile aphanjaniswe befisa. Manje konke ishintshile. Lesi sihloko uzokutshela ukuthi ukuhweba, onjani, bese abakuyo.
Ukuhweba - kuyinto ukuhweba
Imisebenzi eyenziwa ngenjongo nomholo ezinhle. Lolu hlobo lo msebenzi wenziwe kahle abantu ku Ukuhwebelana ekhethekile. Ukuhlanganyela le misebenzi kukhulunywa ngokuthi abadayisi. Ezimweni eziningi, idlala ukushintshisana okunje kukhona abantu abanayo imali eningi ngoba utshalomali.
Ngubani ehilelekile ukuhweba?
Ngokwesibonelo, umuntu has umsebenzi omuhle noma ibhizinisi elichumayo. Yena ukunikeza ngokugcwele ukuze anakekele umkhaya wakhe, futhi izimali "extra" ukuthi utshale kunoma yiliphi ibhizinisi inzuzo ukwandisa isibalo sabo. Ukunikeza ebhange ngesikhathi isithakazelo? Manje yisikhathi sokuthi cishe kunoma iyiphi ebhange ongahlabeki ngokuzumayo, ukuthi alikhuthazi ngokuzethemba ezikhungweni zezimali ezifana esibucayi. Gcina endlini ephephile? Ukutshala Imali Ngokuthenga ingcebo? I nezimpahla ezithathekayo? Noma mhlawumbe babe zimali kanye ukuphathisa ukuphathwa nokubhala umuntu ngalokho ezinakho?
Ingqikithi ukuhweba ezifana
Ukuhweba - umsebenzi ngenxa okuyinto kungenzeka ukuba azale ande izimali zabo kaningi. Yiqiniso, kukhona ingozi okusezingeni eliphezulu lokusha, uma ukhetha kahle professional ukuphatha imali yakho. Trader, eqinisweni, - abadayisi njalo. Lowo uthenga izimakethe eshibhile futhi ezibizayo. Kodwa njengoba ukuhweba - is ngidayisa ngesikhathi exchange stock, ngaphandle kwesivumelwano ngokushesha nge iklayenti, inkinga ngake xaka ngaphezulu. Abahwebi kufanele ukuqhuba ukuhlaziya okuqhubekayo zokusebenza izindleko izimpahla, okuyinto namuhla, kulindeleke ukuba adayise kahle, ukuthola indlela ukutshala kulo mkhiqizo njengoba imadlana ekupheleni kwesikhathi esibekwe ukuthola yokuthengisa inzuzo ngangokunokwenzeka.
Nokho, kulabo bayawazi lo mqondo, sekuyisikhathi eside imfihlo ukuthi ukuhweba - umsebenzi ukuthi muva nje kuyanda e inethiwekhi. Ngaphezu kwalokho, i-Internet enikeza ukufinyelela Exchange elikuvumela ukuba uzame ngokwakho kule ndawo kunoma yimuphi umsebenzisi.
A mzuzu esidlule
Ngaphambili, ngo-ephonseka nineties, ikakhulukazi wahlanganyela ukuhweba amaMelika, bamlandela labo wa emakethe yabo. Ngamanye amazwi, ukufinyelela avaliwe sokusakaza singawathola uma sizila wabathengi owavele, wavula izidingo zayo kuphela amakhasimende kanye, yebo, ngoba imali. Yiqiniso, ukuhweba zezimali abantu abavamile okwakubaluleke engaqondakali. Isofthiwe edingekayo efakwe kuma-computer ukuba abantu abanikwa manje ukufinyelela lokuvala lapho konke okwenzekile. Ngiyavuma, kunzima ukubiza into esidlangalaleni, kodwa lezi amanethiwekhi abizwa ngokuthi inthanethi-ukuhweba. Nakuba kwaba kuphela igama le khodi.
Ngaphezu kwalokho, ngokwenza ukuhweba wabathengi. Bakwazi ukuthola imali zimali ababekhathalela kuphela mayelana nokwenza inhloko-dolobha yabo khulula zingashi, futhi baye bazibekelela imali yabo ngesimo wokwabelana ukuvikeleka yimaphi amaphrojekthi. Ngamanye amazwi, uxhasa ibhizinisi kothile ukuze athole inzuzo noma ukulahlekelwa yimali ngenxa yokukhuphuka kwamanani ezimpahla noma falling emakethe. Ukuqala kokusetshenziswa lo msebenzi wabathengi abathintekayo, ukwembula inethiwekhi giant wobulamuli, eqinisweni, sasiwumsebenzi ukuze lezi wabathengi efanayo ukuthatha imali ukuhwebelana zimali.
Abatshalizimali abaphendukela broker, amnika isizumbulu semali ukuze uyoletha ukutshala enhlokodolobha lakhe into oyoletha inzuzo. Umnini-sitolo, yona, ufuna inkampani noma umkhiqizo lapho ukutshala ke ukukhipha inzuzo kudingekile ukunikeza ukuba ikhasimende futhi umsebenzi uqobo has ukuthola imali yabo.
Ngezinye izikhathi isimo okuphambene, uma inkampani ufuna i zimali sokuthuthukisa ukunikezela broker ethile Luhambo somuntu. Lapha kuyacaca ukuthi broker ngesikhathi ephethwe ukwenza inzuzo nhlangothi zombili. Futhi-ke, abazange sisebenze izingxenye ezincane emakethe, osomabhizinisi yangasese, abameleli ibhizinisi elincane. Kuyaqapheleka ukuthi nomdayisi ngempumelelo encishisiwe zero lapho inzuzo yayo kusukela idili eside kwaba esingaphansi nanhlanu dollar ayinkulungwane. Okungukuthi wabathengi kudlalwa ikakhulu ngezinga elikhulu, noma ayengaphandle engenamsebenzi.
Ngakho kwaba khona isidingo abahwebi. Bayakwazi imali yabo, ngisho noma lungakanani, futhi umkhiqizo ukuthi ubona kufanelekile. AbaHwebi ngokwayo ichaza isikhathi lapho kuyoba ukudayisa, futhi kuzothatha inzuzo yakho. Ayikho kucocisana, ngaphandle exchange.
Ukuze ube abadayisi yimpumelelo ukuqala abadayisi esizayo kudingeka afunde ethile theory kanye ukuthola isethi ecacile imithetho, ngenxa exchange futhi isimo sezomnotho sikhatsi.
Ngakho lokho kufanele abadayisi?
A isisekelo esihle theory.
Ulwazi iziqondiso ukuhweba.
Ukuqonda indlela uqobo emakethe.
ukuhlaziywa okuqhubekayo okwenziwe exchange isitokwe.
Kuyadingeka ukugcina amarekhodi kanye ukuqaphela amaphutha abo.
Amasu amasha zokuhweba.
Sifika eziphethweni ezithile.
Online Ukuhweba: Yiziphi izici zayo?
Esikhathini sethu, Ukuhwebelana eziningi kukhona ukufinyelela okulula nge-World Wide Web. Lokhu kuqinisekisa kucaphela ngaphezulu amanani kanye inzuzo, kuvula amathuba amasha Wabasaqalayo futhi nje enkulu Veterans. Njengoba ithuluzi lakhe eyisisekelo ukuhlaziywa emakethe abadayisi futhi inzuzo, i-Internet - ekahle kakhulu iqoqo eliphezulu kolwazi ezidingekayo nokulawula charting, ezidingekayo ukuze sithole imikhiqizo ngqo kanye namanani. Uhlaziyo yena, kuyadingeka ukuze inzuzo ngezimali kakhulu futhi isizinda alandelayo inzuzo esiphezulu. internet zokuhweba kuphela - kuba ithuba inzuzo ukude futhi ngokushesha.
Ngokwesibonelo, uma kusasa uya Europe ukuphoqelela unswinyo olubhekiswe ukuthini Russian izimpahla selhozpromyshlennosti, ngakho-ke kuyoba ukushoda kwalo mkhiqizo eRussia. UPetru uqhubeka athini kulokhu? Godu kuthiwani nengabe umthengisi manje ukutshala e impahla yezolimo, kabani amanani zehlulekile zikhumule ke kusasa, beseseGibithe besendlini ukuba basukume ke uzothola inzuzo yakho. Yini kwakufanele kwenziweni? Landela izindaba, kuhlanganise logic, Unemali ezisalayo kanye umsebenzi ezisebenzayo exchange isitokwe. Ngakho wonke umsebenzi, kanye ne-Internet-ukuhweba - iyithuluzi isebenziseka ngezindlela eziningi, kuba inethiwekhi Lwenziwe ukuhweba kahle, okuyinto nzima inqubo Ngesaba kakhulu wabathengi ngaphambili ukuba khona yayo inthanethi.
Eziningi kuzo. Ake sihlole ngamunye wabo ngokuningiliziwe.
Uhlobo lokuqala - ukuhweba zezimali. Kuyinto lolu hlobo zohwebo exchange stock, lapho ukusebenza kuphela izibambiso noma nokwabelana. Njengoba intengo kulawulwa ngokufunwa, abadayisi abanekhono akunzima ukunquma ukuthi kungcono ukuthenga noma ukuthengisa okwamanje. Ngokwesibonelo, uma isidingo amasheya enkampanini ikhula, kuyacaca ukuthi maduze intengo bayovuka kubo, into esemqoka - ukubamba uxhumano. AbaHwebi uthatha izindaba ezandleni zakhe siqu futhi uthenge okuningi njengoba kungenziwa ukuze udumo samanje, uye bengavuswa intengo. Futhi kuvela ukuthi inzuzo net uyowela izandla zakhe - umahluko phakathi kusasa futhi intengo lanamuhla. Ngakho, wathengisa ukwabelana yakhe, eqinisweni, hhayi kokuba kubo. Wavele wenza ibhidi ukuhlaziywa yayo. Futhi mina ungase ulahlekelwe futhi uhlale izikweletu. Lona ukuhweba zezimali. Abantu abaningi cishe abawubonanga movie lapho ababeshisekela wabathengi ezithile kanye abahwebi ngokuqondile, ukulahlekelwa 'ukubhidliza "lezi izibikezelo abahwebi ukubashiyela ezikweletini. Ngezinye izikhathi kuyenzeka.
Eyesibili uhlobo - ephezulu imvamisa zokuhweba. Lokhu ukuhweba kwenziwe kumakhompyutha ezikhethekile ukuthi Sichitha izigidi izenzo yezamakhompyutha ngomzuzwana, futhi ngesisekelo lezi opertsii ngokuzimela nizifeze zonke ukuthengiselana of ukuthengwa nokudayiswa izibambiso. ngu intelligence ochwepheshe bathi lolu hlobo ukuhweba kuzole ukusetshenziswa izimakethe kunciphisa tindleko inzuzo. Kodwa le ndlela has bokwenza eziningi. High-imvamisa ukuhweba igxile yesikhashana, ngisho Seconds operation owenza inzuzo encane ngakho futhi umsebenzi inzuzo encane, kwaba ngaphezu kwesikhathi esisodwa kwaholela ekuweni izimakethe.
Uhlobo lwesithathu - "Forex" noma umdlalo -treyding emakethe lwemali. Uma Melika uye lasuka esitebeleni lwemali ushintsho intengo, ithuba imali enhle kuso. Akumangalisi, ngoba izindleko kwalo 'kunganika ukuntanta "in the uhla amaphesenti amane emini. Khona-ke umphakathi wezwe lonke ezicashe jikelele futhi wadala uhlelo ngamazwe yemali, ngawo sekungenzeka ukuba imali ngokwabo. Ayikho into elukhuni. Uyazi ukuthi uma ngonyaka odlule, kwadingeka kweqembu dollar, lokho kwakuyosho ukuthi ithengiswe ngokuqinisekile kubo manje ukuthi kabili ezinkulu. Abahwebi, futhi, ukwazi lokhu. Ngaphezu kwalokho, abakwazi uthole kule imizuzwana embalwa, okwenza ukubheja ethile lwemali pair esekelwe nokucabanga kwabo ukuthi ukufunwa lwemali imayelana avuke, futhi kuyabiza ke kungaba inzuzo ukuthengisa. Ngakho-ke, namuhla, "Forex" -treyding - uhlelo elinamandla ngemali abaningi abasebenzisa i-Internet futhi abantu abathembela kuzo ukuphatha imali yabo ukuze athole inzuzo.
Ngamafuphi. Ukuhweba - ukusetshenziswa Ukuhwebelana, zonke lezo zidingo abanazo kanye nolwazi ukuze athenge futhi athengise inzuzo. Kubaluleke ayibalulekile, ukuthi umuntu ngeke uthenge futhi ukuthi lo muntu noma ikhompyutha umthengi. Into esemqoka kule bhizinisi - inzuzo.
Wena dream ukuvula cafe wakhe siqu? Funda indlela yokukwenza kwesokudla
Zabasebenzi umkhiqizo: kahle, ukukhiqizwa kanye nomshikashika
Umshini shlakoblochnogo: Incazelo kudivayisi. Kanjani shlakoblochnogo umshini ngezandla zabo?
Lokushisa operation okuphansi - laparoscopic
Qasha van nge umshayeli noma oda kanjani Ibhasi elincane